डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, २४ पुस २०७२)
बैङ्कको २०७२/७३ आवको पहिलो त्रैमासमा खुद नाफा ३८ दशमलव ८२ प्रतिशत बढेको छ । बैङ्कको पुस १६ गते भएको साधारणसभाले ५० प्रतिशत बोनस शेयर र २ दशमलव ६३ प्रतिशत नगद लाभांश पारित गरेको छ ।
आरएसआई न्यूट्रल जोन (६८ दशमलव ६० स्केल)मा छ । खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा छ । स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन ७० दशमलव ३९ बिन्दुमा छ । यसले उतारचढाव उच्च रहेको देखाउँछ ।
मुभिङ एभरेज : अल्पकालीन सातदिने औसत मूल्यरेखा, २१ दिने मूल्यरेखा र ट्रेण्ड लाइन एकै ठाउँमा आएका छन् । हालको बिन्दुबाट मूल्य महँगिएमा रू. १ हजार ७ सय ५९ मा प्रतिरोध पाउन सक्छ । मूल्य सस्तिएमा १ हजार ६ सय ६० मा टेवा पाउन सक्छ ।
कम्पनीको चालू आव र गत आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणबीच तुलना गर्दा :
- बैङ्कको असोज मसान्तसम्ममा खुद नाफा रू. ४ करोड ३१ लाख पुगेको छ । सञ्चालन नाफा २३ प्रतिशत बढ्नाले र खुद ब्याज आम्दानी ४१ दशमलव ४३ प्रतिशत बढ्नाले खुद नाफा बढ्न टेवा पुगेको हो ।
- ब्याज आम्दानी ३५ दशमलव ९३ प्रतिशत बढेको छ भने ब्याज खर्च ८७ दशमलव ८६ प्रतिशत घटेको छ ।
- कर्मचारी खर्च २९ दशमलव ८३ प्रतिशत, कुल सञ्चालन नाफा ४३ प्रतिशत र अन्य सञ्चालन खर्च २५ दशमलव ५१ प्रतिशत बढेको छ ।
- रू. ४० करोड २२ लाख कुल निक्षेप सङ्कलन गरी रू. ३ अर्ब १५ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
- कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको छ ।
- पूँजी कोष लागत ५ दशमलव ३५ प्रतिशत र पूँजी कोष पर्याप्तता १६ प्रतिशत छ ।
- बैङ्कको पहिलोे त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख भएअनुसार पीई रेशियो साढे ७२ गुणा छ । गत असोज मसान्तसम्ममा विगत १२ महीनाको आम्दानीका आधारमा प्रतिशेयर आम्दानी रू. ८५ रहेको छ । सो आम्दानी र शेयरको पछिल्लो कारोबार मूल्यका आधारमा निकालिएको पीई रेशियो साढे १९ गुणा रहेको छ । हालको शेयरमूल्य नेटवर्थको साढे ५ गुणा छ ।
- बैङ्कले लाभांश पारित गरिसकेकाले तत्काल मूल्य परिवर्तनबाट बाहेक अन्य लाभ हुने देखिँदैन । मुभिङ एभरेजमा ७ दिनेले २१ दिने रेखालाई काटेर तल झरेकाले मूल्यमा तत्काल सुधार नआउने देखाउँछ । आरएसआई रेखाचित्रले पनि बुलिश टे«ण्डबाट भर्खरै आरोलो लागेको र १ सय ८० दिनको औसत मूल्यभन्दा हालको मूल्य उच्च नै रहेकाले लगानीका लागि केही समय पर्खनु सही हुन सक्छ ।